Semalt बाट Meth विधाहरू जसले वेबसाइट स्क्र्यापिंग बट्स रोक्न मद्दत गर्दछ
वेबसाइट स्क्र्यापि डेटा निकाल्नको लागि एक शक्ति र व्यापक तरीका हो। दाहिने हातमा, यसले स the्कलन र जानकारीको प्रसारलाई स्वचालित गर्दछ। जहाँसम्म, गलत हातहरूमा, यसले अनलाइन चोरी र बौद्धिक सम्पत्तीहरूको चोरीका साथै अन्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धामा नेतृत्व लिन सक्छ। वेबसाइट स्क्र्यापिंग पत्ता लगाउन र तपाईंलाई हानिकारक देखिएको रोक्न निम्न विधिहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
१. एक विश्लेषण उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्:
एक विश्लेषण उपकरण तपाइँलाई वेब स्क्र्यापि process प्रक्रिया सुरक्षित छ वा छैन भनेर विश्लेषण गर्न मद्दत गर्दछ। यस उपकरणको साथ तपाई सजिलैसँग वेब साइट स्क्र्यापिbबट्सलाई पहिचान गर्न र ब्लक गर्न सक्नुहुनेछ संरचनात्मक वेब अनुरोधहरू र यसको हेडर जानकारीको परीक्षण गरेर।
२. एक चुनौती आधारित दृष्टिकोण रोजगार:
यो एक व्यापक दृष्टिकोण हो जसले स्क्र्यापिंग बट्स पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ। यस सन्दर्भमा, तपाईं सक्रिय वेब कम्पोनेन्टहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र आगन्तुकहरूको व्यवहारको मूल्यांकन गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, वेबसाइटको साथ उसको / उनको कुराकानी। तपाईं जाभास्क्रिप्ट स्थापना गर्न वा कुकीहरू सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइट जान्न योग्यको छ वा छैन पाउनका लागि कुकिज सक्रिय गर्नुहोस्। तपाइँ आफ्नो साइट को केहि अवांछित आगन्तुकहरु ब्लक गर्न क्याप्चा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
A. एक व्यवहार दृष्टिकोण लिनुहोस्:
ब्यवहारिक दृष्टिकोण बोटहरू पत्ता लगाउँदछ र पहिचान गर्दछ जुन एक साइटबाट अर्को साइटमा सर्नुपर्दछ। यो विधि प्रयोग गरेर, तपाईं एक विशिष्ट बोटसँग सम्बन्धित सबै गतिविधिहरू जाँच गर्न सक्नुहुन्छ र निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ कि यो मूल्यवान र तपाईंको साइटमा उपयोगी छ वा छैन। धेरै जसो बोटहरू जाभास्क्रिप्ट, क्रोम, इन्टर्नेट एक्स्प्लोरर र एचटीएमएलको रूपमा उनीहरूलाई अभिभावक प्रोग्राममा लिंक गर्छन्। यदि ती बट्सको व्यवहार र उनीहरूका विशेषताहरू अभिभावक बोटको व्यवहार र सुविधाहरूसँग मिल्दैनन्, तपाईंले तिनीहरूलाई रोक्नु पर्छ।
Rob. रोबोट.टक्स्ट प्रयोग गर्दै:
हामी रोबोट.टीएसटीएस को उपयोग स्क्रूटिंग बट्सबाट साईट ढालका लागि गर्दछौं। यद्यपि यो उपकरणले लामो दौडमा इच्छित परिणाम दिदैन। यो केवल कार्य गर्दछ जब हामी यसलाई खराब बोटहरू संकेत गरेर सक्रिय गर्दछौं जुन उनीहरूलाई स्वागत छैन।
हामीले यो याद राख्नु पर्छ कि वेब स्क्र्यापिंग सँधै खराब वा हानिकारक हुँदैन। त्यहाँ केहि केसहरू छन् जब डाटा मालिकहरू यसलाई सकेसम्म धेरै व्यक्तिहरूसँग साझेदारी गर्न चाहन्छन्। उदाहरण को लागी, बिभिन्न सरकारी साइटहरु आम जनता को लागी डाटा प्रदान गर्छन्। वैध स्क्र्यापि ofको अर्को उदाहरण एग्रीगेटर साइटहरू वा ब्लगहरू जस्तै ट्राभल वेबसाइटहरू, होटल बुकि booking पोर्टलहरू, कन्सर्ट टिकट साइटहरू, र समाचार वेबसाइटहरू हुन्।